आ'खिर म'र्नू अ'घि सु'सान्तले कि'न खो'जे गु'गलमा आफुलाई ? के ह'त्या गर्नुको का'रण यहि थियो - PUBLICAAWAJ
अन्तराष्ट्रिय बलिउड/हलिउड मुख्य समाचार
आ’खिर म’र्नू अ’घि सु’सान्तले कि’न खो’जे गु’गलमा आफुलाई ? के ह’त्या गर्नुको का’रण यहि थियो
प्रकाशित : बिहिबार, असार १८, २०७७१७:३० पब्लिक आवाज /संवाददाता
भा’रतिय ब’लिउड ना’यक सु’शान्त सिंह राजपुतले जुनको १४ ता’रिखमा आ’त्महत्या ग’रेका हुन् । आ’फ्नै अ’पार्टमेन्टमा झु’न्डिएको अ’वस्थामा फे’ला परेका सु’शान्तले आ’त्महत्या ग’रेको पु’ष्टि भइसकेको छ । तर पनि मु’म्बई प्र”हरीले उनले आ’त्मह’त्या गर्नुको का’रण खो’जिरहेको छ। मु’म्बई प्र’हरीले उनका नजिकका आफन्त, साथीभाइ, प्रेमिकादेखि केही ब’लिउडकर्मीको समेत बयान लिएको छ ।
अ’नुसन्धानकै क्र’ममा सु’शान्तले आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडि गरेको केही क्रि’याकलापलाई प्र’हरीले ग’म्भीर रुपमा अ’नुसन्धान गरिरहेको छ।भारतीय मिडियाका अनुसार सु’शान्तले आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडि गु’गलमा आफूलाई नै सर्च गरिरहेका थिए । रिपोर्टका अनुसार, आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडि बिहान सवा १० मा सु’शान्तले गु’गलमा आफ्नो बारेमा आएका समाचार पढेका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार, सु’शान्त आफ्नो टि’मसँग म्या’गेजिन, पत्रिका, अनलाइन न्युजमा आउने आफ्नो ख’बरबारे चा’सो राख्थे । केही मानिसहरू आ’फ्नो इमेज ख’राब गर्नका लागि लागिरहेको सु’शान्तले म’हसुस गरेका थिए । यो कुराले उनी निकै नै त’नावमा रहने गरेको पनि बताइएको छ
सार्वजनिकस्थलमा निःशुल्क भोजन नगराइने
थप एक हजार ९११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, मृतक सङ्ख्या ५०९ पुग्यो
कांग्रेस नेता गगन थापालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जमालीको नि’धन, इमरान खानद्वारा समवेदना प्रकट
२०० मत गन्दा रेनु दाहाल पछाडि
पानी परेपछि स’लहको जो’खिम कम हुने
काठमाडौंमा ७४ हजार १९३ मत गन्दा केशव स्थापितभन्दा बालेन्द्र साहलाई १३ हजार ३०२ मतकाे अग्रता
रोचक बन्दै काठमाडौको मतपरिणाम: सिर्जनाले एकलौटी मत
बालेन साहको छोरी जन्मिएको समाचार, श्रीमती सबिना भन्छिन्–‘हाँस्दा–हाँस्दै मर्न लागेँ’